MunaGunyana 2020, matangi maviri emvura anorwisa moto muPurovhinzi yeZhejiang, China akanyatso kupedzwa, uye zvichizotevera kupisa kuchengetedza midziyo ichiri kuenderera mberi.
Matangi maviri emvura aya akareba mamita gumi nehafu uye gumi nemana pakureba. Ivo vane tank matenga uye padivi manera. Kana zvichidikanwa, isu tinogona zvakare Chinja kune yakatwasuka manera.
Uyu ndiwo mufananidzo wetangi rapera.
Iyo nguva yekuvaka izere nemazuva gumi nesere ekushanda, huwandu hwevashandi gumi nevaviri vekuisa, kusanganisira vaviri varairidzi vekuisa.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda, pane ruzivo rwekuonana kumusoro kwewebhu, unogona kundibata,
ndinokutendai nekutsvagisa, ndinokutendai, ndinoshuvira kuti muve nezuva rinofadza!